OS X vs Linux: ny ady farany | Avy amin'ny Linux
pandev92 | | GNU / Linux, hafa
Izaho dia mpiaro tanteraka ny rindrambaiko maimaimpoana, farafaharatsiny nandritra ny 6 volana izay nanana ny fe-potoam-pitetezana Gnu ahy koa, fotoana iray izay nanakianako ny zava-drehetra tonga de Windows ary vao mainka mavesatra aza, izay naterany Apple. Niova tsikelikely ny fahitako, angamba satria tsy mino intsony aho fa ny fiainana amin'ny pc dia zava-dehibe loatra ka manelingelina ny fahazoan-dàlana sy ny anana hafa isan-karazany, koa ankehitriny dia manokan-tena aho hampiasa ireo rafitra miasa rehetra izay mandeha eo amin'ny masiniko.
Avy amin'ny zavatra rehetra voalaza etsy ambony, ny hevitra hoe manandrana mametraka OS X Snow Leopard, amin'ny solosaina findaiko efa ho faty, izay azoko taorian'ny herinandro niady mafy sy nitolona tamin'ny fametrahana sy fanavaozana.
Vantany vao vita ny fametrahana dia niresaka tamin'ny namako Gaara aho momba ny fanaovana lahatsoratra iray hampitahana ny zava-bitan'ny Osx y Linux miaraka amin'ny sary AMD Turionx2 PC sy Mobility Radeon 4650.
Rehefa tonga any OS X, ny zavatra hitanao voalohany dia birao tsara tarehy, hitsin-dàlana fitendry ary programa sasany efa napetraka, tena ilaina tokoa Time MachineFa ahoana ny amin'ny fahombiazan'ny chip sary PC?
Fampisehoana ambany fotsiny, fa tsy azo tsinontsinoavina, ny masinina dia manipy fanodinana betsaka kokoa noho ny sary, ankoatry ny lalao, fa ny zavatra manaitra indrindra dia ny fahafantarana fa misy karatra 4 na 5 fotsiny, izay mamela ny fampiasana sary haingam-pandeha hijerena sarimihetsika, koa raha ianao manana processeur toy ny Intel i3 na ambany kokoa, aza manantena ny ho afaka hijery 1080p tsara, ary tsy manantena ny hisian'ny famaritana avo lenta.
Amin'ireo mpitsidika rehetra nozahako, Firefox, Safari, Google Chrome y Opera Manaraka, ilay hany mampiasa fivoaran'ny gpu, io no malalako indrindra Opera (miovaova), ka tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny fampiasana an'io aho.
Ao amin'ny sehatry ny lalao dia gaga aho nahita seranana sasany toy ny Pro Evolution na Fifa, ankoatry ny fahitako fa misy vondrom-piarahamonina natokana hitarika ireo lalao ireo (Tsy fantatro ny fomba hanaovan'izy ireo izany). Somary mahantra ny fampisehoana amin'ny lalao raha tsy manana sary na cpu mahafinaritra ianao, saingy mbola azo lalaovina ihany.
Toa ambany dia ambany ny isan'ny fampiharana amiko, ary ny tena nahaliana ahy dia tsy maintsy nividy azy ireo aho, saingy eny, ireo vitsy izay misy dia tena mendrika tokoa, indraindray tsy misy ilana azy ny manana mpitendry mozika 5, raha tsy misy mihaona fanantenana. Angamba eto no mipetraka ny tombony lehibe OS X amin'ny Linux, manana fampiharana ara-barotra toy ny MS Office, DJ virtoaly, ny suite Adobe na Steam.
Ny fitoniana dia lehibe tokoa ary ny firaisany miaraka amina endrika hitazomana tsara sy ny fanajana ny fijery sy ny fahatsapana ny sehatra amin'ny alàlan'ny fampiharana rehetra, dia ataovy safidy Windows tsara io. (Ankehitriny raha manapa-kevitra ianao raha te hanandrana azy amin'ny Mac na a Hackintos amin'ireo sombin-javatra mitovy amin'ny 300 na 400 euro latsaka.)
Farany, hitako fa ny Unité centrale manafana kely noho ny amin'ny Windows o Linux, Tsy haiko ny antony….
Izay rehetra voalaza dia mitsikera an-karihary ny fahasahiranan'ny fanaingoana azy aho OS X, mitsikera ireo safidy vitsivitsy izay ao amin'ny tontonana preferences, toerana aiza Linux mandresy amin'ny fihotsahan'ny tany. Raha misy zavatra tiantsika Linuxeros, dia ny afaka manao amin'ny solo-saintsika izay rehetra tadiavintsika: D.
ny ATI en Linux, Averiko ihany, tsy azo ampiasaina izy ireo amin'ny Laptop miaraka amina mpamily maimaimpoana, androany dia mampidi-doza ny fimamoana be loatra vokatr'izany. Ao amin'ny Linux izahay dia manana tranomboky fanafainganana horonantsary ho an'ny rehetra ATI / AMD zavatra izay ao OS X tsy misy na farafaharatsiny tsy mandeha ny ahy.
Terminus OS X y Linux mitovy izy ireo, raha ny marina dia afaka nanandrana ny ankamaroan'ny baiko aho ary niasa izy ireo.
Linux toa sehatra tsara kokoa ho an'ny fampandrosoana, ny hany fomba fanangonana OS X izay hitanao dia ny fametrahana ilay faly Xcode, Tsy nahita fomba hafa hanaovana an'io aho raha tsy misy an'io.
Raha tsy mila fampiharana ara-barotra ianao dia mbola mino izany aho Linux mahafeno ny fepetra takiana rehetra ary raha tsy izany dia te-hialana ianao Windows ary manana pc marin-toerana, fa tsy mahafoy ny ankamaroan'ny rindranasa nampiasanao, OS X Anjaranao izany.
Amin'ny faran'izany rehetra izany dia mbola mieritreritra aho fa tsy misy ilana azy ny manidy rafitra miasa tokana, mbola fanahy afaka aho ary tsy misy zavatra mahaliana kokoa noho ny fahalalana ny fampiasana ny zavatra rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » OS X vs Linux: ny ady farany
Saingy tsy nisotro ronono ianao?
Tahaka an'i Michael Schchacher aho, indraindray miseho xD indray aho
Rahalahy be herim-po, niseho ianao, arahaba, tsy hita ny bilaoginao, tsy mikasa hanao zava-baovao ve ianao?
Heveriko fa efa tonga amin'ny teboka iray izay toa tsy mahafa-po amiko ny fampitahana ny Windows vs OS X vs Linux.
OS X OS ho an'ny mpampiasa vonona handoa be ho an'ny Hardware ary miasa ny zava-drehetra tamin'ny voalohany. Amin'ny lafiny iray dia ho tsara ny zava-drehetra, hiasa tsara izy io, fa amin'ny lafiny iray kosa dia very 98% (na mihoatra) amin'ny fifehezana ny rafitrao. Mety ho an'ny Mpamorona na mpampiasa miara-miasa amin'ny Multimedia ary manana ny Gadget Kit (iPhone, iPad, iMac na MacBook) feno ihany koa.
Windows OS ho an'ny mpampiasa vonona handoa be amin'ny lozisialy ary miasa ny zava-drehetra aorian'ny fametrahana mpamily maro. Mbola tsara tarehy izy io fa amin'ny zavatra rehetra indrindra dia "tsy azo idirana sy azo ampiasaina" faran'izay kely indrindra, ho fanampin'izany, very 99% (na 100%) ny fifehezana ny rafitra. Mety ho an'ny Gammers.
GNU / Linux OS ho an'ny mpampiasa vonona handoa (angamba) hitazomana ireo fitaovana sy tetikasa mifanaraka aminy. Mety ho tsara tarehy araka ny itiavan'ny mpampiasa azy, raha vao mampiditra fahaiza-mamorona sy sary an-tsaina ny birao na ny fitantanana varavarankely ampiasainy. Izy io dia miasa tsara amin'ny solosaina 90%, ary manana fanaraha-maso 99% (na 100%) amin'ny rafitrao ianao. Mety ho an'ireo mpampiasa te hianatra, mpandahatra programa na ireo izay tsy vonona ny hanaiky ny fametrahana an'i Redmond sy Cupertino.
Betsaka na kely eo no ahitako ilay zavatra.
Ralehilahy, hitako fa tsy izaho irery no nahatonga ireto fampitahana ireto 🙂
elektronika222 dia hoy izy:
+1 Manaiky anao aho.
Valiny amin'ny electron222
Tsy mety ny fanehoan-kevitra. Tena tsara. Nanafotra ny zavatra rehetra novakiantsika tamin'ny Internet ianao nandritra ny dimy taona lasa !!!
Misy teboka vitsivitsy hafa izay tsy miseho satria tsy "ivelany" na "objectif" ... fa andao jerena raha mety hampiseho kely azy ireo aho:
Os X: OS ho an'ny mpampiasa despotika, mieboebo matetika ary manana fahefana mividy avo. Fandraharahana sy saina an'izao tontolo izao ary fahatsapana ho an'ny famoronana sy ny famoronana. Minoa ny lalàn'ny tsena amin'ny maha-fivavahana anao. Ireo gorila, neoliberalista ary olona "lamaody sy avant-garde" dia misafidy ity rafitra ity
Windows: Te-hitantana ireo mp3 lamaody ve ianao ary misintona azy ireo maimaim-poana? Te hilaza amin'ny namanao amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy ve ianao hoe manao ahoana ny fahita sy ratsy eo amin'ny fiainanao? Te hisintona sarimihetsika Hollywood be dia be ve ianao mandra-pahazavan'ny masonao? Te hilalao sy hilalao ve ianao satria tsy eo ny ray aman-dreninao sy ny fitiavana. Te hitantana SME na orinasa ve ianao ary mila rindrambaiko matihanina? Te hahatsapa ny "fiarovana" sy ny herin'ny antivirus ve ianao? Safidio ity rafitra ity.
GNU / Linux: Raha nisy zavatra nitranga tamin'ny fiainanao izay nanalaviranao ny fahombiazanao tamin'ireo mpiara-mianatra aminao hatramin'ny fahazazanao ary tsy nijery anao ireo zazavavy ... raha tsy afaka nanana ny baolina hanehoana ny hevitrao araka ny tadiavinao sy maro ianao fotoana nanjakan'izy ireo taminao ... valifaty amin'ny alàlan'ny linux, hendry ary fantaro bebe kokoa noho ireo rajako hafa rehetra izay miasa pc koa nefa tsy mahatakatra na inona na inona! Manomboka eto, amin'ny ho avy dia hanjakan'izao tontolo izao isika. Manokana ho an'ireo tetik'asa ara-tsosialy izay tsy mifarana na aiza na aiza ary ireo ONG izay te hanadio ny fahotany. Mahatsapa ho tsara noho ny zanak'olombelona kely ianao: Linux.
vazivazy ¿hahahaha !!!! miarahaba olona.
FAHATELO dia hoy izy:
ity fanehoan-kevitra ity dia tsy mandeha tsara amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra
Mety ho iray ihany izy io?
Nolazaiko etsy ambany io, tsy afa-po amin'ny fahafantarana ny fampiasana afa-tsy iray aho, tsy fantatrao mihitsy hoe ho aiza ny fiainana, na dia ny fiainanao aza :).
Avy eo dia efa nahatanteraka aho, afaka mampiasa ny zava-drehetra aho hahahaha.
Eny, BSD afa-tsy ny paoma tsara, mazava ho azy ...
Fa efa niatrika ireo rafitra roa ve ianao sa tsia? Iza no nandresy tamin'ny ady farany?
Ho marin-toetra aminao aho. Ho an'ny lohateny dia nanantena fidirana matotra kokoa aho. Naka sary an-tsaina horonantsary toa ilay tao amin'ny YouTube aho, izay i Tux miady amin'ny sary famantarana Windows. Na izay iray hafa izay miatrika motera ninja Tux.
Hahaha tsy afaka manao horonantsary aho, fa maro ny olona milaza fa tsy suar flash xD…, ahahahaa. Tsy nolazaiko hoe iza no mpandresy, eo ny tsirairay, fa azoko mazava tsara :).
Ao amin'ny Mac dia misy fampiharana antsoina hoe iMovie raha tsy fantatrao
Mhh tsy tsapako izany, ho hitako izay hitranga.
Logos dia hoy izy:
Ny marina dia ny vidin'ny MAC dia toa snob mihoatra ny zava-drehetra. Fa na iza na iza te handany izany dia zon'izy ireo mazava ho azy, satria rafitra tsara io. Ireo izay tsy manao, ny tetik'asa fanabeazana fototra dia toa tena tsara, mitondra interface tena milamina nefa haingana sy maivana ampiasaina amin'ny solosaina ordenadores tsy dia matanjaka
Mamaly ireo logo
biomassa dia hoy izy:
Ny mifanohitra amin'izay no izy. Saika tsy misy fampitahana tato ho ato. Te-hahita ny fampitahana amin'ny fivoaran'ny GNU / Linux aho ankehitriny, ny mpamily azy, ny tontolon'ny sary sns.
Mamaly ny biome
Avia fa amin'ny vidin'ny mac, raha ampitahaintsika ny pc amin'ny pc, dia fitaovana izany raha rafitra fiasa, ndao ho marin-toetra, ny fampiasana paoma dia tsy fomba mety, tsy hanana fanampiana ianao ary azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha hanan-java-manahirana toa ireo izay nanananao nametraka azy ianao, izay vao notononinao anarana. (ary ianao no mandoa izany). Ny rafitra tsirairay dia samy manana ny mahatsara sy maharatsy azy, ny mac system dia tsy mamela azy ara-dalàna, tsy raharahako ny windows hametraka azy amin'ny hardware Mac (na mahavita aza izy) raha toa ka manolotra an'io ho fanohanana ny microsoft, ary linux tsara farafaharatsiny misy ny kinova natokana ho an'ny mac . Madio tena madio ny rafitra mac, saingy tsy maintsy mandoa vola na fitaovana sy rindrambaiko (afaka mahita mac open source na compilations ianao, toa tsy nitady an'izany ianao.) Tsy azon'izy ireo ny antsipirian'ny fotony izay tsy notondroinao izany.
Eny, tokony ho hitanao tsara izany, tsy liana amin'ny fanohanan'ny paoma aho, na amin'ny windows na amin'ny linux aza manana izany aho fa mandoa redhat na zavatra toy izany aho. Ny mazava dia afaka mametraka pc toy ny mac ianao, amin'ny 400 na 500 euro latsaka raha hainao ny mikaroka, tsy dia sarotra koa izany.
Heveriko fa 20 Euro ny rakikiran'ny liona ...
Ny rakikira Snow Leopard dia nandoa ahy € 29 ary Ojo, havaozy, tsy maintsy manana Leopard ho any amin'ny helo ianao, raha tsy izany dia tsy mendrika izany ilay rakikira.
Tadidio fa tsy mila mandoa xD ianao, raha ny marina raha mametraka leoparda piraty ianao dia tsy fantatrao mihitsy, satria tsy mangataka serial na zavatra hafa.
Mazava ho azy, saingy € 29 izany, raha tsy izany dia hijanona ao amin'ny banky piggy izy ireo.
Demenus dia hoy izy:
Raha ny tena izy, tsy ilaina izany antsipiriany momba ny fananana Leopard izany, nataoko fanavaozana avy amin'ny Tiger ary koa ireo fotoana namerenako azy fa ny DVD fanavaozana ihany no ilaiko, tsy mila fanamarinana izany, eny, very ny fonosana fampiharana iLife iray manontolo ianao
Valiny tamin'i Demenus
Ny tahan'ny fampisehoana / vidiny dia toa fisolokiana amiko, amin'ny lafiny sary hitako tsara kokoa ny birao KDE, mandoa $ 10 ihany koa ho an'ny fampiharana iray izay azo atao amin'ny script. Amin'ny alàlan'ny fandoavana vola amin'ny programa ary avy eo noho ny fanavaozana azy ireo miaraka amin'izay rehetra voatahiry azoko apetraka amin'ny volafotsy ny pc. Avy eo dia milaza aminao izy fa tsy afaka mihazakazaka ny OS vaovao ny solosainao ary rehefa mahita ilay taloha mitovy amin'ny fanavaozana telo ianao.
Lehilahy eto amin'izao tontolo izao dia voaloa ny zavatra rehetra, tsy hitako ny olana, efa nilaza aho fa tsy hividy mac, afaka mihazakazaka amin'ny pc, ka raha tsy hamitaka ahy izy ireo xD.
Voaloa ny zava-drehetra? Tena havako izany ... tsy nandoa denaria iray hampiasa Linux mint aho. Izaho koa tsy nandoa kapila mafy ho an'ny kapila 140gb izay nalaiko tamin'ny solosaina finday efa simba ary mampiasa disk azo esorina xD ...
Azonao atao ny manisy soa azy amin'ny fanasoavana na ny ratsy amin'ny "karma" voalaza etsy ambony (murphy….) Fa tsara.
Fa ao amin'ny KDE ahoana no hametrahanao ny menus fampiharana toa ny OSX sy Unity?
Ilaina ny fananana toerana malalaka ary hitantanana tsara ny menu rehetra
Etsy ankilany, ny openhot dia tsy ratsy, fa mila mahay mamorona lohahevitra rakikira boky (toy ny hoe mandalo takelaka / sary) na programa tsara endrika Garageband ianao (Rosegarden dia estetika amin'ny taonan'ny pirà) . miaraka amin'i Jackd configurement, ary kitiho ny + jackd satria mifampiady izy ireo mba hahafahanao ho sarotra kokoa OSX tsara kokoa
Miarahaba anao !! Ireto lahatsoratra farany ireto dia tsara indrindra. Isaky ny tiako kokoa ity bilaogy ity.
Misaotra 😀 😀
hahazoana dia hoy izy:
Eny, ho an'ny hevitrao ... ary andao, tsy mamela izay tena hevitro manokana, fantatro fa maro ny olona mino fa fisolokiana io, ary ny tena marina dia avo dia avo ny vidiny, saingy ohatra ny solosaina finday Apple. .. maharitra maharitra ny bateria Tena maivana be izy ireo, tsy manafana, ny trackpad dia fifaliana ary ny fitovizany dia tiako, tiako ny rafitra, saingy mazava ho azy, manome anao fahalalahana be dia be izany. olona mampiasa izay tadiaviny. Na dia ny rafitra tena tiako indrindra aza dia ny Linux, tsy azoko afenina fa ny laptop-ko dia manana fiainana bateria mandritra ny 40 minitra ary manana olana mifanentana amin'ny hardware na dia amin'ny Windows aza, ka 1000 € ho an'ny macbook air dia mety mendrika izany (ny laptop-ko 550 ).
Te-hanandrana mac-osx aho, ary hiezaka ny ho mpanova, ny hany zavatra nanakana ahy dia ny pc-ko, izay "maty" ny reniny, fa manangana hafa aho.
Raha mila fanampiana aho indray andro any, manontania fotsiny :), eto aho mba hanampy amin'izay ilaina, mba tsy hisy handany herinandro hanandrana toa ahy ehehe.
e2391 dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara! Hifikitra amin'ny sazinao farany sy ny hevitr'i Elav aho.
Hitako ho fitaovana ny OS. Ny tsirairay dia hampiasa ilay mifanentana amin'ny filan'izy ireo.
Valiny amin'ny e2391
«Fifanarahana amin'ny zavatra ilaintsika» .. ary ny fampifanarahana ny filan'ny fahalalahana amin'ny faritra rehetra (koa ny virtoaly) an'ny fiarahamonina na an'izao tontolo izao, huh, haha ​​.. Milaza aho fa tokony.
Heveriko fa ny Chromium / Chrome dia mampiasa ny Acceleration GPU avy amin'ny andiany 11, ary handeha 17 maharitra izahay ary 19 ho an'ny fampandrosoana. Mila manoratra amin'ny tabilao momba ny: saina ianao ary alefaso ny mifanitsy aminy.
Efa nanandrana aho, fa rehefa manao ny fitsapana ny hafainganam-pandeha dia mbola tsy mandeha ihany io, amin'ny safariako dia mijery ihany koa ny fomba hanaovana izany, saingy tsy nahita fomba.
Nampiasa Mac aho andro vitsivitsy tamin'ny asa farany nananako, ary raha manangona vola hividianana iray aho, na avy amin'ny efijery izay mijanona ny CPU (rehetra ao anaty iray hoy izy ireo) na rivotra macboc.
Tiako ny zavatra niainany Mac.
Mweh, izaho dia iray amin'ireo mpivarotra fako izay mandray izay azony ka miaina azy io ... Ary nanompo ahy tsara i Linux noho izany. Raha ny marina, fotoana vitsy lasa izay dia lasa Mac efa antitra sy mahia aho tao an-tranon'ny namana iray, ary koa ny solosaina finday iray tamin'ny taona 2005, ary zara raha nirehitra ... Rehefa avy niaraka tamin'ny namana elektronika iray (eny, nanodidina ahy be dia be aho ny geeks avy amin'ny kilasy rehetra) ary avy eo nanomboka nanipy distro tamin'io aho ... Mbola tsy afaka mahazo iray izay miasa 100% ho ahy aho, fa raha mampirohotra ahy izy ireo dia hahatratra 92% ny fahaizany (Debian no tsara indrindra noho izany dia manohana ny shit rehetra) ...
Manaiky tanteraka, na dia izaho aza dia niorina tamin'izany, tsy ny zava-drehetra dia mety ho 10Gb RAM sy i7, ary koa ny ambany indrindra iainantsika eto an-tany xD.
.. eny, samy manana ny fahalalahana miditra am-ponja isika, tsy misy olana. TPT !!
Ho an'ny etika ... ho fampandrosoana ny serasera (fa tsy hoe manana ny fiainanao na tsy amin'ny pc ianao) dia aza mampiasa zavatra manentana na dia tsara tarehy aza. Tsy misy ifandraisany amin'ny maha troll GNU na fahombiazan'ny rafitra miasa izany. Rindrambaiko sosialy ny SL. tsy fitaovana avy amin'ny tsena tsy miankina. Andao, efa fantatrao izany rehetra izany. Mahaiza mandanjalanja !! ampio izao tontolo izao ary mieritrereta tsara tarehy !!
Ny mac dia mety ho haingana kokoa (amin'ny masony fotsiny) fa voafetra izy ireo, mora kokoa ny manatsara ny rafitra fiasa amin'ny fitaovana iray voafetra toy ny mac (satria manapa-kevitra izy ireo hoe iza amin'ireo fitaovana nesorina sy namboarina dia pro ho con), fa tsy misy isan-karazany ny solosaina PC, tiako ny hahafahako manatsara ny fametrahana linux toa izao (izay azonao atao nefa maharitra ela, ny distro ihany no manao izany dia ny gentoo). Te hahafantatra aho raha toa ka fanombohana haingana sy fampisehoana izany. Amin'ny alàlan'ny fananana ny kernel fotsiny nohamarinina ho an'ny fitaovana sasany, ary ny fanangonana programa ho an'ny CPU. Raha misy mpampiasa gentoo dia ampahafantaro ahy hizara izany traikefa izany.
Ny rahalahiko dia hifindra avy any Ubuntu mankany MacOSX efa ela lasa izay, indrisy aorian'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy dia nanohy nitazona izy ary tsy nandalo ilay fantson-drano ary na izaho na izy tsy nahalala nanohy, ny marina dia kamo ihany koa izahay.
Nieritreritra foana aho fa ny rahalahiko Ubuntero izany raha toa ka nihazakazaka i MacOSX: P.
farafaharatsiny mandritra ny 6 volana izay nandraisako ny vanim-potoanan'ny troll Gnu ahy koa, fotoana iray izay nanakianako ny zava-drehetra avy amin'ny Windows ary ny tena zava-dehibe kokoa aza, izay avy tamin'i Apple.
Misy zavatra manome ahy amin'ny GNU. Manome tsiny ny toe-tsaina miiba izy ireo na dia tsy misy ifandraisany amin'izany aza.
Ny fahakiana sy / na fahavalon'ny Microsoft na Apple na iza na iza, dia tsy misy ifandraisany amin'ny GNU sy Free Software.
Ho an'ny GNU, ny FSF sy ny lozisialy maimaim-poana izay zava-dehibe dia maimaim-poana ilay rindrambaiko ary raha (*) na dia avy any Microsoft aza dia raisina tsara. Ary raha tsy izany, na ny voasarimakirana ny fahombiazany na avy amin'ny fototry ny masera virijina madio, tsia.
(*) Fantatra ihany koa fa ny rindranasa dia tsy tokony hanana tanjon'ny fifehezana, fitsikilovana, fanararaotana, fanimbana, "famerana" ny mpampiasa.
Ity rafitra manohitra ny hafa ity sy ny adin'ny pro Linux dia an'ny LinuxTroll, TuxTroll, sns; Manilika ny redundancies, ny anton'izany dia ny manandratra ny zava-drehetra izay penguin ary vao mainka aza manafika izay tsy penguin, indrindra eo amin'ny sehatry ny fahefany mivantana. Ireo olona ireo koa amin'ny tranga maro dia misy ny mason-tsivana sy ny fenitra mifantina arakaraka ny fotoana, fa zavatra hafa izany.
Miloka aho fa mbola tsy nisy nahita GNU Troll teto. Tsy tadidiko ny fahitako azy.
Misy zavatra hafa tsy azo lavina, ny Mac UI dia mahatratra ny tarehin'ny tsirairay, na dia ampanjifainao manokana aza ny linux na ny windows ...
Tsy vitako akory ny namaky ilay lahatsoratra satria raha ny tena marina dia tena ratsy io> :(
Ampitahao ny zava-bitan'ny Mac, izay ny orinasan-dry zareo, toy ny mahaliana toy ny politikany Orwellian sy ara-bola, dia mpitarika amin'ny fampivoarana sy fanavaozana ny vokatra haitao avo lenta, mifanohitra amin'ny masinina mahazatra izay manana GNU / distro Linux generic dia hadalana tanteraka. Apple dia miavaka amin'ny fampidirana rindrambaiko / fitaovana na dia matetika aza izy ireo dia manao dingana tsy mety (toy ny maodely Mac tamin'ny taona 2010/2011 izay nahitana zavatra betsaka nilaina) ary ny GNU / Linux dia miavaka amin'ny fitomboan'ny laps sy fetra ka izay fotoana fohy hanarahana azy dia mampiasa HP Pavilion 4287cl miaraka amin'i Intel sy ATi hybrid VGA miaraka amin'ireo mpamily openource aho ary ny marina dia ny fahalalana ny fomba hanovana ny kernel sy ny motherboard ary koa ny fampiasana ny PowerTop 2 ilay olana. ny fanafanana dia angano tanteraka.
Mikasika ny rafitra fiasa: MIKASIKA ny MacOS. Izaho dia nampiasa SnowLeopard sy Lion (10.6 sy 10.7) nandritra ny fotoana maro izao ary claustrophobic izy ireo ary tsy zaka, tsy zakan'ny olona zatra ny fahalalahana sy ny fahalalahan'ny GNU / Linux ampiasaina.
Nampiasako betsaka ny Mac, na ny 23 ″ iMac na ny MacBook Pro, ary mihoatra ny endrika ivelany (ary amin'ny tranga sasany fananganana fitaovana) ny keyboard dia tsy azo zahana ary ratsy kokoa ny rindrambaiko ...
Raha tsy maintsy mampiasa rindrambaiko manokana amin'ny asako aho, ohatra, Autodesk na zavatra mitovy amin'ny fanovàna feo / horonan-tsary matihanina dia ny Windows no safidiko voalohany, izay maharikoriko ihany koa nefa 20 heny mora kokoa noho ny vidin'ny elite izay ampandoaviny anao amin'ny Mac ary azonao atao izany. ampiasao mitovy amin'ilay rindrambaiko matanjaka kokoa amin'ny rindrambaiko matanjaka kokoa.
Etsy andanin'izany, fantatrao ve fa mivarotra "mpizara" lafo be i Mac, fa ny mpizara azy kosa mandeha amin'ny AIX HP sy Debian GNU / Linux?
Mitroka i Mac, raha tianao ny manandrana azy dia efa nametraka sary VMware mialoha i Mammoth mba halefa.
Momba ny asshole dia tsy hamaly anao aho satria farafaharatsiny afaka mampiasa Espaniôla mahazatra ianao, momba ny iray hafa, izay tsy tianao macs dia tsy midika hoe maloto izy ireo, manontania torolàlana linus dia ho hitanao hoe inona izy holazaiko aminao. Mino marina aho fa ny macbooks, ary ny rivotra, miaraka amin'ny an'ny Lenovo Lenovo no hany pc tokony vidiana. Osx dia rafitra tiako, toy ny tiako Windows 8 amin'ny ampahany ary ny chakra miaraka amin'ny kde, no zavatra tsara amin'ny tsy maha Taliban ahy toa ny sasany.
Mac ekeko fa tsara izany ary ny fart rehetra, saingy ny Windows 8 dia tianao tokoa ve ny maka tahaka ny sary mihetsiketsika eo amin'ny firaisana sy Kde?, Namana mitandrema ary manaova solomaso satria mamela anao XD jamba ny efijery win8.
Ny marina dia, tsy manana na inona na inona mifanohitra amin'ny mac aho, rafitra fiasa tena tsara izy io nefa lafo ary raha mbola tsy nanao zavatra tamin'ny fiainako aho dia nandoa ilay rindrambaiko.
Raha ny amin'ny windows dia manana safidy 2 ianao, miezaha hanome azy tolotra efa ho 5 ora, amin'ny famakafakana sy famonoana otrikaretina, fanalefahana ary avy eo manadio ny fisoratana anarana amin'ny regcleaner na mamela ny rafitra ho mavesatra sy feno viriosy (traikefa WinXP, WINVISTA SY WIN7) . Windows hack azo hacked ary tsy mandoa iray mihitsy ianao.
Ny marina dia aleoko ny Debian-ko ary ny Linuxmint-ko dia tsy misy tsara noho izany, fa manarona ny filako sy amin'ny lalao satria tiako ny lalao tsotra toa ny Lugaru, opensonic ary Megaglest noho ny iray mavesatra indrindra ato amiko, ary koa ny goba fanafihana .
ary gammer amin'ny linux aho. Mikasika ny zava-bita, ny mpikirakira ahy dia tsy olana lehibe, izy io dia duo 2 miaraka amin'ny ram 2gb ary ny rafitra dia manomboka amin'ny ondrilahy 100 mb ary ny faran'ny laniny dia 520 mb, tsy mila bebe kokoa aho.
Fa araka ny efa nolazain'i elav dia samy mampiasa izay mifanaraka amin'ny filany avy ny tsirairay.
Eny, tiako kokoa ireo efamira kely ireo noho ny interface mahazatra, inona no tianao holazaiko aminao, ohatra, tiako kokoa noho ny gnome Shell izy ireo, fa na izany aza ho an'ny tsiro loko.
Efa fantatray izany ary manaja ny fivavahanay izahay. sakaiza, arahaba soa.
hahahaha ity ady amin'ny rafitra miasa ity. toa ady ara-pivavahana ireo. Tokony hanao ligy fitsarana izy ireo, izay ahitan'ity mac, linux ary windows ity ny fifanarahana iray.
Izahay maqueros dia ligin'ny aloka ahaha avy amin'ny batman xd
Novakiako tao amin'ireo hevitra etsy ambony fa hitan'izy ireo fa tsy misy dikany ny fampitahana an'ireo rafitra fiasa telo ireo. Tsy mitombina? , hoy aho, ity fampitahana ity (sy ny adihevitra tafiditra) ny kely indrindra dia tsy mitombina. Ao amin'ny solosaina birao dia tsy misy afa-tsy ny hery telo ao amin'ny OS (linux misy ny fizarana tsirairay amin'ny fizarana samihafa fa ny voan-kernel sy OS fototra ihany, toy ny "satroka mena" na "debian", ity farany ampiasain'ny "ubuntu") Miasa mandritra ny androm-piainana hamoronana kaody kaody lehibe (mitentina an-tapitrisany dolara, tsy noforonina tao anatin'ny iray andro na herintaona). Misokatra ny adihevitra, fa ny fomba fijeriko (fintino) dia ny hoe gnu / linux dia mahafantatra ny fomba hanararaotana betsaka ny fitaovana, izay mahatonga ny siny taloha, ohatra, Ubuntu 10.10, mihazakazaka tsara lavitra noho ny fifaninanana, Windows 7 , na raha afaka mametraka OS X aza ianao dia hitohy ny fahombiazan'ny linux. Mazava ho azy fa misy sorona raha tsy manana gnu / linux fotsiny isika, fa manana izany fahalalahana hanana mihoatra ny iray. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy manana Windows aho izao hamoronana antontan-taratasy momba ny teny, na hilalao lalao video amin'ny alàlan'ny Windows directX. Ka mbola tsy hadalana ve ny adihevitra sy fampitahana an'ireo SO telo ireo? … Ok, ka aleo mividy MacBooks amin'ny OS X foana satria "milay" (esoeso) izy ireo. Lahatsoratra tsara.
Azo Midori 0.4.4